The Irish Spud: ntkọ Mkpụrụ Gburugburu --wa - Potatoes News
The Irish spud: Plagha mkpụrụ gafee ụwa
Ahịa IPM Potato nke Ireland na-ekesa poteto mkpụrụ na kọntinenti ọ bụla belụsọ Antarctica.
Otutu ahihia nke Irish na-ako “oke onu” nke hectare n'okpuru nkpuru na mba dika Egypt, Iraq, Morocco, Canary Islands, South Africa, Kenya na UK.
IPM bụ ụlọ ọrụ zuru oke nke Donegal Investment Group plc na-etu ọnụ maka ụdị azụmahịa iri atọ nke azụmahịa na mpaghara ebe a na-emepụta mkpụrụ n'ọtụtụ ntọala ụwa na azụmaahịa karịrị mba iri anọ.
Na 1970s, IPM sonyeere mmekọrịta azụmahịa na Teagasc Potato Breeding Programme, nke rụpụtara ihe karịrị ụdị 40 ụdị nduku maka ahịa mba na mba ụwa, kemgbe 1962.
Rooster bụ ndị a maara nke ọma ụdị Teagasc nke etolitere na Oak Park, isi ụlọ ọrụ Co Carlow, n'ihi nnukwu uto ya na ogo esi nri.
"Ebumnuche mbụ nke mmemme ozuzu bụ ịzụlite mkpụrụ dị elu, mbubreyo ọkụ ọkụ maka ahịa Irish iji dochie ụdị ọdịnala dịka Kerr's Pink na Record," Denis Griffin, Teagasc Researcher na Crops Research Center kwuru.
Denis Griffin, Teagasc na-eme nchọpụta na Crops Research Center na-ekwu na ebumnobi mbụ nke usoro ịzụlite bụ ịzụlite mkpụrụ dị elu, nke na-egbu oge na-eguzogide ọgwụ maka ahịa Irish iji dochie ụdị ọdịnala dị ka Kerr's Pink na Record.
“Mwebata nke ikike nke ndi oru ugbo na 1970s choro otutu ndi iche iche. nzube nke usoro ihe omume ahụ wee gbanwee ngwa ngwa. ” Njikọ aka na IPM naanị maka iche Teagasc dị iche iche dugara nnukwu uto na ọrụ Ireland na mmepụta poteto, nri nke atọ kachasị mkpa n'ụwa niile.
A na-eji ihe dịka ala 9,000ha akụ poteto na Ireland kwa afọ.
"Ihe dị ka 70% nke ahụ bụ Rooster, nke bụ Teagasc zụrụ iche iche," ka Mr Griffin kwuru.
"Teagasc etinyela nnukwu ego nke teknụzụ na mmemme ahụ gụnyere mmemme DNA nke nwere ike ịgbaso nguzogide na mbido mmemme ahụ." N'ime ihe karịrị iri 40 dị iche iche ewepụtara kemgbe ntọala nke usoro nduku, ihe karịrị 25 ka na-azụ ahịa taa, yana mmadụ ise na-aga n'ihu n'ahịa.
"IPM, nke na-arụ ọtụtụ ọrụ n'Africa ugbu a, na-ere ụdị anyị niile na mba ụwa, yabụ dịka ọmụmaatụ na UK, Cara bụ ụdị dịgasị iche iche na-aga nke ọma n'ebe ahụ," Maazị Griffin kwuru.
“Kenya bụ isi ihe na - eme ka anyị nwee ọtụtụ Java, a na - akụ ya n’ebe ahụ; otú ahụ ka ọ dịkwa Buffalo. ” "Anyị rụkwara ọrụ ụfọdụ na Etiopia afọ ole na ole gara aga ma ugbu a, anyị nwere nwa akwụkwọ Ph D na Eritrea na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Africa, otu n'ime mba ndị kasị daa ogbenye n'ụwa, ebe ụdị Electra na-eme nke ọma." Mr Griffin kwuru, sị, "Ọtụtụ ụdị poteto ochie ndị gara Afrịka gaara eso ndị ozi ala ọzọ ahụ laa azụ n'afọ ndị 1920 na 30.
“Enwekwara otutu ozuzu nke International Potato Center n'Africa mere, n'ihi na o doro anya, ọ bụ ebe siri ike karị n'ebe ahụ ma e jiri ya tụnyere ebe a.
“A na-erepụ ọtụtụ Europe poteto mba dị iche iche na Europe; ya mere, ozuzu ozuzu omume na-agbado isi na Europe.
"Nke a bụ n'ihi na ọdịnala anyị nwere ihu igwe dị jụụ maka ịmị mkpụrụ na obere ịfefe nje ka a ga-ebupụ ya .680 Banyere ala 9,000ha na-eto poteto na Ireland kwa afọ, 70% nke bụ Rooster.
"Mana, na mba dịka Kenya, ndị bi ebe ahụ chọrọ ịnwale ma mepụta ụdị poteto dị iche iche nke Irish na mpaghara ya ọ bụ ya mere IPM ji hibe azụmahịa ebe ahụ." "Ngalaba na-akwado ụlọ ọrụ ahụ site na Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ Ugbo, Nri na Mmiri na Irish Aid." Mgbe ọ na-agwa Irish Examiner, Colm McDonnell, IPM Potato Group kwuru na gọọmentị na Kenya nwere "atụmatụ nwere oke" ịzụlite azụmaahịa poteto ebe ahụ.
Ọ na-ekwu na mgbado anya dị na nduku bụ "akụkụ dị mkpa nke nri, nchekwa nri na akụnụba".
Na, IPM na-arụ ọrụ dị mkpa na nke ahụ niile.
“E nwere nnukwu nsogbu na Kenya na enweghi ike inweta nduku ahihia di nma; ha choro nkpuru nke sitere na mmemme akwadoro nke enweghi oria na oria ojoo, “ka o gara n'ihu.
“Anyị na-esonye na nke ahụ niile ma chee na ọ bụ ihe anyị nwere ike inye aka.
"Enwere akụkụ nke nnyefe ihe ọmụma yana agụmakwụkwọ na ihe a niile." Ọ rụtụrụ aka na nkwado na njiri nri yana ọrụ poteto na nke ahụ, dịka ụwa na-achịkọta ngwa ngwa na mbọ iji belata ikuku anwuru.
Mazị McDonnell kwuru, "Nkpuru osisi nduku bụ akụkụ dị ukwuu nke ụkpụrụ na-adigide ma ọ ga-abụ akụkụ nke foto a ogologo oge na-abịa."
“Ka anyị wee nwee ike ịmalite azụmaahịa anyị, anyị ga-eche echiche na mpụga igbe; Ireland bụ obere obodo na Europe jikọtara nke ọma n'ihe metụtara akụkụ ụfọdụ nke ịmịpụta nduku na itinye n'ọrụ.
“Ma, ka anyị wee nwee ike ịga n’ihu itinye ego na nyocha na mmepe, anyị ga-ebuputa ụdị anyị iche na mba dị iche iche.
“Nkwado bụ okwu a na-aza ugbu a, na anyị niile nwere ọrụ iji belata ịdabere na kemịkalụ na mmiri.
“Mmiri na-adịwanye ụkọ ma dịkwa oke ọnụ inweta maka ihe ọkụkụ, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịzụlite ụdị nduku nke nwere ike itolite na obere ịgba ala na obere mmiri mmiri, ma na-arụ ọrụ nke ọma, nke ahụ ga-enyere aka.
Anyị kwesịkwara ịzụlite ụdị nwere ike ịnagide ọnọdụ ihu igwe dị oke njọ n'ihi mgbanwe ihu igwe.
Ya mere, anyị na-ekwu maka ụdị ike siri ike nwere ike ịnagide ọtụtụ nsogbu. ”
isi mmalite: irishexaminer.com
Tags: Canary IslandsEgyptIraqIrelandKenyaMoroccoSouth Africa
Oriri nduku nke US, nke ejikọtara ya na ogo nri dị elu
'Prọfesọ Po Tato': Prọfesọ tụgharịrị bụrụ 'nduku' na Zoom, ụmụ akwụkwọ ya hụrụ ya n'anya ...
Ụlọ ọrụ na-agba mbọ ịmaliteghachi azụmaahịa mkpụrụ nduku Scotland na Europe
Ndị otu Chain na -echegbu onwe ha maka ịlụ ọgụ wayo mkpụrụ nduku
Enweghị ọgwụ ahụhụ, mkpụrụ na-ada ngwa ngwa
Varietiesdị poteto mkpụrụ ọhụrụ atọ sitere na UK akwadoro maka mbupụ na Kenya
Washington State nduku Commission na-enyere nduku na-eto eto itinye Integrated Pest Management